Iphupha lokwamkela Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Xa sibona umntu esimaziyo okanye xa saziswa kumntu ebesingamazi ngaphambili, siyambulisa. Amasiko okwamkela abonakalisa imbeko kwaye ahluka ngokwenkcubeko. Kwezinye iidolophu, ezinje ngeJapan, bayabulisana ngaphandle kokuchukumisa. Kwinkoliso yamazwe aseYurophu, abantu bayaxhawula xa bebulisa. Ukwala ukuxhawulana kuthathwa njengesithuko esibi. Abahlobo nabantu oqhelene nabo badla ngokubuliswa ngokwanga esidleleni okanye ngokwanga.
Ukuba uphupha ubulisa umntu, ungonwaba kakhulu xa umbona. Okanye mhlawumbi umntu oleleyo akonwabanga kuba kufuneka abulise umntu angamthandiyo. Ke ngoko, ekutolikeni amaphupha kubalulekile ukuba ngubani umntu ophuphayo obulisayo, kodwa kunye nokuba injani imeko xa ubulisa.
1 Uphawu lwephupha «bulisa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «bulisa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «bulisa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «bulisa» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwitoliki yesiko lamaphupha, ukwamkela usapho okanye izihlobo luphawu oluhle kakhulu. Isimboli yephupha ibonisa amagama anobubele kunye a Umoya ohambelanayo. Umntu oleleyo unokuthembela kutyelelo olumnandi okanye umyalezo obalulekileyo. Ukuba awumazi omnye umntu kakuhle, kodwa ngokwaneleyo ukuba ubabulise, iphupha alibi njalo. Ubomi bemihla ngemihla buphawulwa yimbeko, kodwa hayi ngobubele.
Ikwangumqondiso olungileyo xa umntu ophuphayo ebulisa umntu onobutshaba kuye. Umfanekiso wephupha ubhengeza elinye ngephupha. ukuphuculwa yobudlelwane. Ngokwenkcazo edumileyo yamaphupha, uphawu "lwamkelekile" lwamaphupha kule meko lunokutsalela ingqalelo kutyelelo olungemnandanga.
Kwamanye amaphupha umntu oleleyo sele ebulisa udluleukuba wayethanda kakhulu ngexesha lobomi bakhe. Ukutolikwa kwamaphupha, oku kuthembisa izibonelelo kuthethathethwano nasekuphunyezweni kweeprojekthi ezithile. Ukuba umphuphi uyagula ngexesha lokulala, uphawu lwephupha "wamkelekile" luthathwa njengesilumkiso seziphumo eziyingozi zesi sifo.
Uphawu "lokwamkela" lamaphupha lunokunika ulwazi malunga noku. Ubomi bosapho unike ukuba ephupheni abantwana okanye ezinye izalamane ezisondeleyo badlala indima. Ngokuya kuhlalutyo lwamaphupha, iziganeko ezilungileyo ziyabhengezwa kwimeko yosapho. Xa ilungu losapho libulisa ngokufudumeleyo umphuphi, umfanekiso wephupha ubonakalisa ukuphucuka kobudlelwane phakathi kosapho kunye nokwamkelwa okukhulu kobuntu bakhe.
Nabani na otshayelela umbuliso ephupheni lakhe kufuneka anyamekele impilo-ntle yabanye abantu kwi el mundo ukuvuka kwaye angacingi ngaye kuphela. Ukuba abaxabana babuliswa ngokuqhwatywa izandla kwi-wrestling, umntu kufuneka abukele iingxoxo zakhe zangaphakathi ekuvuseni ubomi.
Uphawu lwephupha «bulisa» - ukutolikwa kwengqondo
Uhlalutyo lwengqondo lokulala, iimvakalelo zomntu olele ephupheni zibaluleke ngokukodwa. Ukuba wonwabile ngokudibana, uphawu lwephupha "bulisa" luphawu lwe Vula ingqondo. Umphuphi unako ukungena engaziwa ngengqondo evulekileyo kunye nokwamkela imingeni emitsha. Ukuba uziva ungonwabanga ngumbuliso, i-subconscious yakho ikubonisa ngephupha lokuba uzama ukunqanda iingxaki ezithile okanye ungquzulwano.
Kwangelo xesha, ukwamkela umntu luphawu lomntu. contact. Ngokwenkcazo yephupha, umnqweno wokwamkelwa okukhulu ubonakaliswe kumfanekiso wephupha. Umntu ophuphayo mhlawumbi usandula ukuphoxeka kubomi bokwenyani.
Unokuziva ngathi ushiywe ngaphandle kwaye ungahoywa. Uphawu lwephupha "ukwamkela" lumele ulangazelelo lokufezekisa kunye nokuphuculwa kwe Ukuzithemba kodwa.
Iphupha apho umntu abulisa umphuphi onobuhlobo livumelekile kuhlalutyo lwengqondo lwephupha njengophawu lokuba umphuphi useluxolweni nesiqu sakhe. Uqinisekile ngaye. Xa usamkela abanye ekhayeni lakho, umfanekiso wephupha "ubulise" ukwabonisa oko ukuthembela ukusuka ebuthongweni kuye.
Uphawu lwephupha «bulisa» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "wamkelekile" luphawu lokuba umphuphi wamkelwe kwinqanaba lokomoya. Ukusukela kwakhe Ukufezekiswa ngokomoya fumana abakhuseli. Ukuba abantu ephupheni baxhawulana xa bebulisa, iphupha elo libonisa amandla nolawulo, kunye nokusebenza kwengqondo.
Ukuba ukwanga kutshintshiswana, uphawu lwephupha "bulisa" lumele olunye. intsikelelo yokomoya, uthando, intlonipho kunye nomanyano.